Ntuziaka Site na nmikpo: Otu esi mata njirimara Phishing
Ntugharị bụ ihe ndị scammers na-eme iji gbalịa ịme ndị ọrụ na-amaghị ihe. Ha na-agbanwe ozi ha ka ha yie ndị sitere n'aka ụlọ ọrụ ndị ziri ezi ma na-aghọgbu ndị mmadụ n'inye nkọwa ha, ma jiri ya mee ihe maka ịzu ohi. Ụfọdụ n'ime nkọwa akọwapụtara dịka aha njirimara BT, ma ọ bụ paswọọdụ. Ọ dị mkpa iburu n'uche na BT anaghị ajụ maka ozi nzuzo ma ọ bụ ọbụna kọntaktị na-enweghị ihe kpatara ya. Ọzọkwa, BT ozi ịntanetị enweghị ihe mgbakwunye.
Julia Vashneva, Semalt Onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ndị ahịa na-agba ọsọ, na-adụ ọdụ ka ndị ọrụ Ịntanetị nọgide na-ele anya maka ihe ndị dị otú ahụ dịka ha na-egosi sikwuo ike - human resource management system software.
Otu esi esi edee Email
Ozi ịntanetị na-esi ọnwụ na nkwenye onye ọrụ, maọbụ jụọ maka ozi nkeonwe bụ enyo, na ndị ọrụ kwesịrị izere ha. Ha na-eme ụdị ndị a:
ozi ịntanetị a na-atụghị anya ya nke na-enye ihe dị mma iji bụrụ ezigbo onyinye
Njikọ email nke na-ebute weebụsaịtị, nke na-ajụ onye iji nyochaa nkọwa nke akaụntụ.
Ndị na-aghọ aghụghọ na-emepụta akụkọ na-agụnye ngwa ngwa ịrata ndị a tara ahụhụ.
Na - ejikarị URL eme ihe ma ọ bụghị ndị agbakwunyere na ozi email.
Nyochaa nzizi nke ihe ọmụmụ na ihe oyiyi ndị e jiri na email.
Nzọụkwụ iji nweta ozi ederede Phishing
Ihe e mere na-adabere na onye ọrụ meghere email. Ngalaba a na-ejikọta na emelite phishing na BT jiri phishing@bt.com ma ọ bụrụ na otu chọrọ ịchọta ha.
Ọ bụrụ na otu ịpịghị ma ọ bụ zaghachi ya na njikọ ndị enyere, ma mepee email ahụ, ọ nweghị ihe kpatara nsogbu..Enwere ohere na enweghi nkwekọrịta ọ bụla, onye kwesịrị ịchọta ozi email ma ziga ya na ngalaba phishing na BT, ma wepụ ya.
Ọ bụrụ na otu onye pịa na njikọ ahụ, ma ọ bụ ibudata mgbakwunye agbakwunyere, mana ejighị ihe ọ bụla n'ụdị ahụ, onye ga-agba mbọ hụ nje virus wee kọọrọ email ahụ.
Ọ bụrụ na otu onye nyere nkọwa ha, ihe mbụ ị ga-eme bụ iji nyochaa kọmputa maka ihe nchekwa. Mgbe ahụ, weghachite akaụntụ BT ka enwere ike ịnwe ohere imebi. E nwere ndị nduzi maka esi edozi akaụntụ ndị ahụ, na ozi ịntanetị. N'akụkụ nke onye ahịa ahụ, na-agbanwe agbanwe okwuntughe na ndị ọkachamara na-atụ aro iji otu pụrụ iche maka akaụntụ ọ bụla. Banks chọrọ ọkwa ka ọkọlọtọ ọ bụla ọrụ ọ bụla ma ọ bụrụ na mmadụ enyelarị nkọwa ego ha. N'ikpeazụ, kọọrọ email na ngalaba phishing.
Ònye na-enweta ozi ịntanetị phishing?
E nwere ndị dị nso na 37.3 nde ndị ọrụ na-enweta ozi-e ntanetị dị ka ọnụ ọgụgụ site na 2012 na 2013. Nkọwa kachasị mfe bụ na e nwere ụzọ dị iche iche ndị scammers na-eji nweta ozi imel iji jiri ha mee ihe. Ha na-eji bọtịnụ na-akpaghị aka, weebụsaịtị ndị na-adịghị ọcha, na-achọpụta ezigbo ebe nrụọrụ weebụ, ndepụta ntanetre site na ndị ọzọ na-aghọ aghụghọ, na-egosi na ha bụ ebe nrụọrụ weebụ na-egbochi ozi ịntanetị. Ịnata ozi dị otú ahụ anaghị etinye aka na onye ọrụ ahụ n'ihe ize ndụ, ọ bụ ihe e mere mgbe nke ahụ gasịrị na tinye ha n'ihe ize ndụ.
Ichebe Mgbochi Ime Ihe Nri
Ụlọ ọrụ ahụ na-enye BT Protect, nke na-enyere aka igbochi ọgụ malware na ngwaọrụ niile ejikọrọ na ịntanetị.
Nbudata BT NetProtect Plus bụ uru ọ gbakwunyere na ya dị ka ọ na-enye ndị ọrụ ya na ọkwa na egwu egwu ebe ọ bụ na BT na-ebugharị ozi ịntanetị ọ bụla site na ndị ọrụ ndị ọzọ na NetProtect Plus otu.
Na-atụgharị spam iyo na mitigate egwu.
Jide n'aka imelite ngwanrọ weebụ niile.
Agaghị azaghachi ozi email enyo.
BT Provisions iji jide n'aka na Nchekwa Ahịa
Ụlọ ọrụ ahụ enyela njikọ nke ndị ọrụ nwere ike izipu ozi enyo enyo, nke ha na-ewe ozugbo. Ọ na-enyere aka na nlekota ebe nrụọrụ weebụ niile weere na ha ga-ekere òkè na ọrụ phishing ma wepụ ha mgbe ejidere ha.